भवानी न्यौपाने ’भावना� -
फोनको घन्टी बज्छ केहीबेर, नानु पूजा गर्दैछे । आफ्नो घरमाथि छतको मन्दिरभित्र । सोमबारको व्रत बसेकी छे । लगातार धेरैपटक घन्टी बजिरहेको हुन्छ । पूजा गर्दागर्दै उठेर फोन रिसिभ गर्छे । के छ नेप्टी ? के गर्दैछ्यौ ? हजुर प्रणाम काला हृदयश्वर । नानु बोल्छे प्रत्युत्तरमा । म पूजा गर्दै थिएँ, आज सावन महिनाको अन्तिम सोमबार, सोमबारे व्रत अनि शिवजीको पूजा गर्दैछु । हजुर त कति भाग्यमानी आज यो महत्वपूर्ण एवं अमृत प्रहरमा हजुरको फोन आयो । भाग्यमानी नभएको भए तिमीलाई पाउँथे त ? म सारै भाग्यमानी छु, त्यो मन्दिर जहाँ तिमीलाई मैले जीवन समर्पण गरेको थिएँ । मेरो न्यानो वात्सल्यताले छोपेको त्यो मन्दिर जहाँ तिमी पूजा गर्दैछ्यौ ऋतेष बोल्दैछ ।
नानुको मुटुको धड्कन बढ्यो । प्रेमको हुरीले गहभरी सम्झनाका नुनिला ढिका भरिए । नानु धेरै बोल्न सकिन । ऋतेष बोल्दै गयो । धेरै खन्यायो प्रेमका पवित्र भाव बोल्दा बोल्दै उ पनि गम्भीर भयो । त्यत्तिकैमा ल पूजा गर अहिले राख्छु यति भन्दै फोन राख्यो । नानुले पूजा गरेर सकी । उसले ऋतेष पनि मेरो जीवनको भगवान् हो भन्दै केहीबेर ऋतेषलाई सम्झेर पूजा गरी । नानु दयाकी खानी हो करुणाकी प्रतिमूर्ति हो । पूजा गरिसकेपछि प्रेमका विन्दुहरू नयनभर छताछुल्ल पोखिंदै थिए मन्दिरबाट उठेर तल आई खाना पकाई बेबीलाई खुवाई आफू भने व्रत बसेकी छे । हाजिर हुँ जानु छ कार्यालयमा भन्दै तल झरी फटाफट अफिस पुग्छे । अफिस खुल्लै थियो । हाजिर भई, आफ्नो काम गरी । अफिस सकिएपछि घर फर्कंन्छे नानु । कहिले त्यत्तिकै बस्दिनँ उ, केही न केही गरिरहन मन लाग्छ नानुलाई । तल कोठामा झरी अनि कलमका डोबिला पंतिहरुमा सिर्जनाको चलाउँदै गई । हलो सिस्टर तल ओर्लनुहोस् न दिनभर थन्किएर बोर भएको छ, घुम्न जाऔं भनेर पत्रकार दम्पतीले बोलाएपछि हस् म आएन भन्दै तल ओर्ली उ घुम्न गई । नानु सँधै आफ्नो अध्ययन र जागिरे जिन्दगीको कारण एक्लै बस्छे । भित्ता भुइँबाहेक घरको आँफू बस्ने तलामा अरु कोही छैन, एउटा बेबी उही पनि हाफ होस्टेल । दिनभर दुवैजना घरमा हुँदैनन् । बेलुकी भेट हुन्छ मम्मी छोराको साढे नौ बजे अनि खाना खान्छन् सुत्छन् । खानापछि केहीबेर अध्ययन गर्छे नानु ।
त्यसपछि मात्र सुत्छे । रात चढ्दै जान्छ, उसको मनमा आफूलाई एक्लो अनुभूति हुन्छ । अनि ऋतेषको सम्झनामा बगिरन्छे । कतिबेला फेरि मन मनले बोल्छे । ए ऋतेष काला तिमीले मलाई आफ्नो बनाएर कहाँ गयौ ? म देखि धेरै टाढा भयौ किन ? यहाँ म सँधै एक्लै छु । म कोसँग मनको भारी बिसाउँ ? को सँग बोलुँ ? काला मलाई दिनभरको व्यस्तताले राम्रोसँग सास फेर्ने फुर्सद हुन्न । जब रातले डेरा जमाउँन थाल्छ अनि मलाई तिम्रो माया र सम्झनाले सताउँन् थाल्छ । .के म तिमीसँग कहिले सँगै नबस्ने ? मलाई पनि तिम्रो काखमा बसेर रुन मन छ काला । नारीको जीवन लिएर जन्मनु आफंैमा दिक्क लाग्छ । पढेलेखेर पनि बुझ पचाउने हाम्रो समाजसँग प्रतिकार गर्दै बाँच्न अत्यन्त मुस्किल छ ।
लैंगिक समानताका कुरा भाषण र नारामा सीमित छन् ।.... तिमी त दिनभर ब्यस्त भए पनि बेलुकी दिदीको काखमा छौ । तिम्रो तिम्रो नानु यहाँ सँधै एक्ली छ । ऊ बिरामी हुँदा पानी दिने कोही छैन, काला घर संसार मिलाउनु, बेबीहरुको हेरचाह गर्नु, दिनभर जागिरमा व्यस्त, सारा काम कुराको बोझले टाउको फुट्ला जस्तो गह्रौ हुन्छ काला तिमी सँधै टाढा बस्दा मेरो जीवन सँधै एक्लिएको छ । म बाँचुन्जेल तिमीसँग कहिल्यै नजिक हुन्न, किनकि म मेरो स्वर्गजस्तो घर छोडेर त्यहाँ जान सक्दिनँ तिमी आफू बसेको ठाउँ छोड्न सक्दैनौ । यस्तै भोगाइमा बित्नेछ हाम्रो जीवन । उफ !! कस्तो जिन्दगी । ईश्वरले यस्तो अभाव खेप्न पठाएका हुन् त हामीलाई ? यस्तै मन मनले बोलिरही धेरैबेरसम्म कतिबेला निदाइछ बिहान चार बजे एकै कोल्टेमा ब्यूउँझी । क्रमशः...
ग लाइन, तुलसीपुर दाङ